Unqulo & Umoya Edlulileyo nekhoyo
Mayelana neGhosha, Lopamudra, Maitreyi noGargi
Abafazi bexesha leVedic (malunga ne-1500 ukuya ku-200 BCE), babeyi-epitome yezinto ezibonakalayo ezingqondweni nangokomoya. I- Vedas ikhululeke ukuthetha ngala mabhinqa, abo bobabini bancedisa kwaye bancedisa amaqabane abo abesilisa. Xa kufikelele ekuthetheni ngamanani amaqhosha ebhinqa kwixesha leVedic, amagama amane - iGhosha, Lopamudra, Sulabha Maitreyi, kunye noGargi - baya engqondweni.
Ubulumko beVedic bufakwe kwiimvumi ezininzi kunye nabamabhinqa abangama-27 abavela kubo.
Kodwa uninzi lwawo luyintsimi nje ngaphandle kwabancinci, njengoGhosha, onomntu ocacileyo. Umzukulu we-Dirghatamas nentombi kaKakvat, bobabini abahlabeleli beengoma zokudumisa ama-Aswwins, iGhosha inamaculo amabini eencwadi yeshumi, nganye iqulethe iindinyana ezili-14, ezinikezwa igama lakhe. I-eulogi yokuqala i-Aswwins, amawele asezulwini abuye aphengululi; okwesibini isifiso somntu esichazela imvakalelo yakhe kunye neminqweno yobomi bomtshato . UGhosha wahlushwa ngesifo esingahlambulukiyo, mhlawumbi iqhenqa, waza wahlala e-spinster endlwini kayise. Ukucetyiswa kwakhe kunye nama-Ashwins kunye nokuzinikela kookhokho bakhe kubangele baphilise isifo sakhe baze bamvumele ukuba abe nemibhangano emabini.
I- Rig Veda ('iRoyal Knowledge') ixubusha iingxoxo phakathi kweAgasthya yegosa kunye nomkakhe uLolamudra ofaka ubungqina obunengqiqo kunye nobuhle bokugqibela.
Njengoko umlenze uhamba, uLolamudra wadalwa ngu-Agasti waseShawya waza wanikwa njengentombi kaKumkani waseVidarbha. Isibini sasebukhosini samnika imfundo engcono kakhulu kwaye yanyusa phakathi kwayo. Xa ufikelele kwiminyaka engatshatanga, Agastiya, inzala eyayingaphantsi kwezibhambathiso zobuncwane kunye nentlupheko, yayifuna ukuba ngumnikazi wayo.
ULopa wavuma ukutshata naye waza washiya isigodlo sakhe kwi-herthage. Emva kokukhonza umyeni wakhe ngokwethembeka ixesha elide, uLopa wakhathala ngenxa yezenzo zakhe. Wabhala ingoma yamatye amabini enza isingeniso sakhe sothando kunye nokuthanda kwakhe. Kungekudala emva koko, i-sage yaqaphela imisebenzi yakhe kumfazi wayo kwaye yabenza ubomi bakhe basekhaya kunye ne-ascetic ngenzondelelo efanayo, ifikelela ekuphefumlweni kwamandla angokomoya nangokwenyama. Kwazalwa unyana. Wabizwa ngokuthi nguDridhasyu, owaba ngumlobi omkhulu.
I- Rig Veda iqulethe malunga neengoma eziliwaka, apho malunga no-10 bavunyelwe kuMaitreyi, ummeli wesifazane kunye nefilosofi. Wenegalelo ekuphuculeni ubuntu bakhe bendoda, uYajnavalkya kunye neengcamango zakhe zokomoya. UJajnavalkya wayenamadoda mabini aMaitreyi neKatyyani. Ngethuba uMaitreyi wayesazi kakuhle izibhalo zesiHindu kwaye wayeyi-brahmavadini, uKatyyani wayengowesifazane oqhelekileyo. Ngelinye ilanga inqweno yagqiba ekubeni yenze ukulungiswa kwezinto zayo zehlabathi phakathi kwabafazi bakhe ababini kwaye ilahle ihlabathi ngokuzifaka izibhambathiso. Wabuza abafazi bakhe umnqweno. Umfundi Mafundiyi wacela umyeni wakhe ukuba yonke ubutyebi ehlabathini beyomenza angafi.
Indoda yaphendula yathi ubutyebi bungazondla kuphela, akukho nto. Emva koko wacela ubutyebi bokungafi. Yajnavalkya wayevuyile ukuva oku kwaye wanikela uMaitreyi imfundiso yomphefumlo nolwazi lwakhe lokufumana ukungapheli.
UGargi, umprofetikazi weVedic kunye nentombi ye-vachaknu yezintlu, wabumba iingoma eziliqela ezibuza umvelaphi wobukho bonke. Xa uKumkani uJanak waseVideha wayilungisa 'brahmayajna', iqumrhu lefilosofi elijolise kwi-sacrament yomlilo, uGargi wayengomnye wabadlali abatsha. Wayecela umngeni uYajnavalkya nge-volley yemibuzo ephazamisayo emphefumlweni okanye kwi-'manman 'eyayididisa indoda efundileyo eyayiye yalalisa amaninzi amaninzi. Umbuzo wakhe - " Uluhlu olungaphezulu kwezulu naphantsi kwehlabathi, echazwe njengendawo ephakathi komhlaba kunye nezulu kwaye ibonakaliswe njengophawu lwexesha elidlulileyo, elikhoyo kunye nekamva, liphi le ndawo?
"- i-bamboozled ngisho nabantu abakhulu beVedic beencwadi.
Ufuna ukuTutoyer? - Inkcazo yesiFrentshi ichazwe
UMark Orrin Barton